महामारीमा चम्कियो स्मार्टफोन ब्यापार – मिठो कुरा
केही मिठो बात गर ...
मेलबर्न स्टार्सको विजयी सुरुआत
जङ्कफुडको ‘मिठास’भित्र विषालु तत्वको बिगबिगी !
महामारीमा चम्कियो स्मार्टफोन ब्यापार
by user1 1 month ago 1 month ago
२६ मंसिर, काठमाडौं । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म २१ लाख ९० हजार ८२५ वटा मोबाइल/फोन सेट आयात भयो । त्यसका लागि १४ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम विदेशियो । आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा २ अर्ब २४ करोड ६ लाख कर तिरे । यसरी हेर्दा ४ महिनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँको फोन नेपाली बजारमा आएको छ ।
गतवर्ष यही अवधिमा २० लाख ११२ वटा फोन सेट भित्रिएको थियो । त्यसका लागि ८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने १ अर्ब ३६ करोड कर उठेको थियो ।
महामारीबाट सिर्जित बजार
मोबाइल बिक्रेता संघका अध्यक्ष पुरु बस्नेतका अनुसार लकडाउनमा मोबाइल पसलहरु बन्द रहँदा आपूर्ति नभएको मागका कारण सुरुमा बजार उचलियो । कोभिड १९ महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थिति पनि ब्यापार वृद्विको कारक बन्यो । लकडाउन र त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मोबाइलमा मानिसको निर्भरता बढ्न पुग्यो ।
भेटघाटका लागि बाहिर निस्कन असुरक्षित हुने भएपछि समय बिताउन पनि धेरैले स्मार्ट फोन किनेको र ‘वर्क र्फम होम’को अवधारणा आएसँगै यस्ता डिभाइसको माग बढेको बस्नेतको अनुभव छ ।
अनलाइन कक्षा र भर्चुअल मिटिङ बाक्लिँदा स्मार्ट फोनको मागमा भारी वृद्धि भयो । भएका सीमित र पुराना डिभाइसबाट काम नचल्ने भएपछि नयाँ किन्न पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
घरमै बस्नुपर्दा इन्टरनेटमा भिडियो हेर्न क्रम बढ्यो । बालबालिकाको विद्यालय नभएकाले गेम खेल्ने र अभिभावकले अनलाइन कारोबार गर्ने क्रम बढेसंगै स्मार्ट फोन दैनिक जीवनको आवश्यकता भएर ब्यापार वृद्वि भएको आईएमएसका सीईओ मल्होत्रा बताउँछन् ।
अहिले स्मार्ट फोनको मात्रै हैन, ट्याब र ल्यापटप लगायतका डिभाइसको व्यापार पनि बढेको छ ।
तस्करी र उपहार निरुत्साहित
महामारीपछि मोबाइल फोनको तस्करी पनि निरत्साहित भएको छ । भारतीय सीमाबाट आवातजावत बन्द भएकाले पारीबाट मोबाइल तस्करी गर्ने क्रम पातलिएको छ ।
आईएमएसका सीईओ मल्होत्राका अनुसार लकडाउनअघि नेपालमा अवैध बाटोबाट भित्रिएका २० प्रतिशतसम्म सामसुङका सेट ‘एक्टिभ’ हुन्थे । अहिले त्यो ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको उनले बताए ।
अहिले विदेशबाट हवाई सेवा खुलेपनि उडान सीमित छ । अति आवश्यक नभई विदेश नजाने र विदेशबाट पनि नआउने अवस्था छ । यसले गर्दा विदेशबाट मोबाइल सेट उपहार आउन रोकिएको छ । सँगै, विमानमार्फत हुने फोन तस्करी पनि घटेको छ ।
यी सब कारणहरुले गर्दा स्मार्ट फोनको वैधानिक ब्यापार चम्किन पुगेको छ ।
darr lagyo my lord
तपाईंलाई मन पर्छ कि ?
सातौं हप्तामा भरतपुर अस्पताल सरसफाइ अभियान
by राजन दिल गुरुङ
मिलन लामाले गायिका बन्ने चाहना राखेकी बालिकालाई गरे आर्थिक सहयोग ( भिडिओ सहित )
संगैको साथीको चर्चा बढ्दा यस्तो भयो भिडिओ सहित
२६०४ औ तमु ल्होसार भब्यताको साथ मनाउदै
धुप र मैन बत्ति बेच्दै हिड्न पर्दा चित्त दुख्छ
and share your story with others!